Xullo warqadda sida ugu fiican loo aqrin karo si loogu adeegsado websaydhkaaga ama mashruucaaga | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta loo dhan yahay waa arrin muhiim ah iyo xulashada farta la heli karo ee boggaaga Waxay muhiim u tahay nooc kasta, maahan oo keliya hay'adaha dadweynaha iyo hay'adaha samafalka ah.
Marka qaabkee ku ogaan kartaa waraaqaha noocee ah ayaa runtii la heli karaa Ka waran haddii ay ka dhigan tahay tanaasul la xiriira qaabeynta?
Kuwani waa qaar ka mid ah talooyinka ay tahay inaad raacdo:
Iska ilaali inaad ku dhacdo dabinka dooro naqshad u eg ciyaalnimo, maxaa yeelay looma baahna.
In kasta oo ay u muuqan karto wax iska cad, hase yeeshe, tani waa mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee caadiga ah in ay ka go'an tahay. Shakhsiyadda ayaa muhiim u ah qaabeynta, sidaas darteed waa inaad raadisaa font ku habboon si qumman leh naqshad oo wax ku ool ah.
Waa lagama maarmaan inaad iska ilaaliso Xullo qaabab uu mugdi ku jiro inta udhaxeysa jilayaasha qaar; Kuwa ay tahay inaad tixgeliso badanaa waa xarafka weyn "B" iyo "8"; lambarka "1" iyo xarafka "I" ee xarfaha waaweyn; nambarka "1" iyo xarafka "l" ee xarafka yar.
Xullo far qoraal ah oo leh 2 xaraf oo yar "a" ayaa kaa caawin doonta baabi'iso jahwareerka jira xarafka "o"
Hadaad isku aragto adoo isticmaalaya qaar qoraallo yar yar oo 16pt ah ama ka sareeya, sida sameynta cinwaanada ama cinwaanada hoose, waxaan kugula talineynaa inaad doorato a la’aan taasi waxay leedahay xisaab furan oo ballaaran, maadaama loo arko inay tahay tan ugu habboon.
Raadi nooc ka mid ah warqad oo leh dherer weynmaadaama ay muhiim u tahay xulashada websaydhka. Jaranjarooyinka iyo Kordhinta Kordhinta ayaa kaa caawin doona inaad sameyso qaababka xarfaha ayaa aad u cad.
Raadi qaar ka mid ah boosteejooyinka furan iyo xisaabiyeyaasha, maxaa yeelay kuwani waxay kaa caawin doonaan hufnaanta warqadda, maadaama hadday aad u xiran yihiin ay bilaabaan inay buuxiyaan cabbirro aad u yar.
Tirooyinku waa inay kala duwanaadaan, gaar ahaan markay timaado caasimada "0" ee xarafka "O". Xaalada "6" iyo "9", waxaa lagama maarmaan ah inay iyaguna leeyihiin terminaal furan.
Mid baa jira saamiga ugu fiican ee dhererka x ilaa ballaca istaroogga. Si loo gaaro sharci ahaanta ugu fiican, ballaca xariiqda waa inuu ahaadaa 17 ama 20% oo dherer ah.
Dabada xarafka weyn "Q" oo si muuqata uga soo muuqata wareegga xarafka waxay ka caawisaa hagaajinta akhriska.
El meel u dhexeysa xaraf kasta waa inuu ahaadaa mid isku dheelitiran oo qaafiyad leh, tan iyo sidaan waxaad si fudud ku garan kartaa jilayaasha ay tahay.
Iskuday inaad ku tijaabiso font dusha sare ee midab madow, maxaa yeelay sidan waxaad ku arki kartaa waxay u egtahay Ficil ahaan kiisaskan kala dheereynta waxay u egtahay inay ka adagtahay sida ay tahay, sameynta qaababka xarfaha ay u egyihiin sida dhalaalka, taas oo leh cawaaqibka in isha ay u muuqato mid dib loo soo cusbooneysiiyay sida dhabta ah.
Moodhadh la heli karo oo si fiican loo qaabeeyey waa inay noqotaa mid xarrago leh oo leh shakhsiyad, haddana isla mar ahaantaas waa inuu lahaadaa akhrinta aasaaskeeda, si loo soo jiito tiro badan oo macaamiil ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sida loo xusho farta la heli karo